भोजपुरबाट कतिले दिँदैछन् एसईई परीक्षा परीक्षा ? - Khabarsansar.com
भोजपुरबाट कतिले दिँदैछन् एसईई परीक्षा परीक्षा ?
भोजपुर, २८ फागुन ।
भोजपुरबाट आगामी चैत्र ८ गतेदेखि शुरु हुने एसईई परीक्षामा तीन हजार वढी विद्यार्थी सहभागी हुने भएका छन् ।
जिल्लाबाट नियमित तर्फ दुई हजार ९ सय ४३ र आंशिक तर्फ तीन सय तीन गरि कुल तीन हजार २ सय ४६ जना विद्यार्थी सहभागी हुने जिल्ला शिक्षा कार्यालय भोजपुरले जनाएको छ । भोजपुरमा नियमित तर्फ १५ र आंसिक तर्फ एक गरि १६ ओटा केन्द्र निर्धारण गरिएको छ ।
यसै विच परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय सानोठिमीले परीक्षाको तयारी पूरा भएको जनाएको छ । परीक्षा नियन्त्रक अम्बिकाप्रसाद रेग्मीले प्रश्नपत्र, उत्तर पुस्तिकासँगै अन्य सामग्री पनि जिल्ला पठाई सकेको वताए । । वर्ष नियमित तर्फ चार लाख ५२ हजार र आंशिक तथा प्राविधिक विषयमा ३३ हजार गरी कूल चार लाख ८५ हजार विद्यार्थी परीक्षामा सहभागी हुँदैछन् ।
परीक्षाका लागि देशभरमा एक हजार ९५६ परीक्षा केन्द्र निर्धारण गरिएको छ । बिहान ८ देखि ११ बजेसम्म हुने परीक्षाको पहिलो दिन चैत ८ गते अनिवार्य अँग्रेजी विषयको परीक्षा हुनेछ । प्राविधिकतर्फका परीक्षा चैत १४ गते शुरु भई २० गतेभित्र सम्पन्न हुनेछन् । परीक्षामा एक हजार ९सय ५६ केन्द्राध्यक्ष, तीन हजार नौ सय १२ सहायक केन्द्राध्यक्ष र २३ हजार निरीक्षक खटिने बताइएको छ ।